सबै समस्याको समाधान डीएनए परीक्षण नहुन सक्छ - Samudrapari.com
१३९५ पटक हेरिएको
ललितपुर – “विज्ञान असजिलो पनि हुन्छ, यसले सामाजिक संरचना हेर्दैन । जे छ, त्यो देखाइदिई हाल्छ । कहिलेकाहीँ त डीएनए नगराइदिए हुन्थ्योजस्तो लाग्छ । सबै समस्याको समाधान डिअक्सिराइवो न्युक्लिक एसिड अर्थात् डीएनए नै त होइन नि ?”
यो भनाइ राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समिति खुमलटारका कार्यकारी निर्देशक जीवनप्रसाद रिजालको हो । “अदालतले कतिपय मुद्दा र व्यक्तिले शङ्काकै भरमा डीएनए गराउनुपर्छ भन्ने छैन । परीक्षणको नजिता र त्यसको असर अर्कै हुनसक्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । कार्यकारी निर्देशक रिजाल नेपाली सामाजिक संरचना फरक खालको भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ मिलेर बसेको समाज र परिवारमा विशेष परिस्थितिबाहेक डीएनएको पछि लाग्न नहुने जिकिर गर्नुहुन्छ ।
“कहिलेकाहीँ त बच्चा लिएर बाबु वा आमा आउँछन् र लौ यो बच्चाको डीएनए गर्नुप¥यो, यो मेरो छोरा वा छोरी हो÷होइन ? भन्छन् । त्यो बच्चा उनीहरूको सन्तान ठहरिएन भने के हुन्छ”, रिजाल भन्नु हुन्छ, “जसरी समाजमा धर्मपुत्र वा पुत्रीका रूपमा अर्काको सन्तान राख्ने चलन छ । अभिभावकको मृत्युपछि तिनले डीएनए गराए भने के होला ?”
किन यस्तो भयो ? भन्दा त्यो जोडीले पछिमात्र कुरा खोल्यो । खासमा चार जना बच्चामध्ये दुई जना उनीहरू दुवैको थियो । श्रीमान् भारतमा रोजगारीको सिलसिलामा रहँदा ती महिला यौन दुव्र्यवहारको सिकार भएकी रहिछन् । त्यति बेला उनको गर्भमा बच्चा बसेछ । श्रीमान् फर्केपछि ती महिलाले सबै कुरा सुनाइन् ।
श्रीमान्ले जे हुनु भइगयो, गर्भमा रहेको बच्चालाई स्वीकार्ने वचन दिएछन् । अर्को बच्चा जो दुवै जनाको देखिएन, त्यो बच्चा नातेदारको रहेछ । भतिजाको एक जना युवतीसँग बिहेपूर्व बसउठ रहेछ । ती युवतीबाट जन्मेको बच्चालाई ती महिलाले आफ्नो सन्तानजसरी हुर्काएकी रहिछन् ।
“मानौं, ३०÷४० वर्षपछि ती बच्चाहरू डीएनएका लागि आए भने के जवाफ दिने ? विज्ञानले यस्तो अवस्थामा के कसरी न्याय दिन सक्छ ?”, रिजाल प्रश्न गर्नुहुन्छ ।
अदालतको पछिल्लो निर्णय डीएनएको नतिजाविपरीत गयो भन्ने कुरा मलाई पनि धेरैले सुनाए तर अदालतले जे गर्यो त्यो सही गर्यो । म अदालतको निर्णयलाई हार्दिकताका साथ स्वागत गर्छु”, कार्यकारी निर्देशक रिजालको भनाइ छ ।